समानान्तर Samanantar: June 2010
Posted by Govinda at 6/06/2010 09:20:00 AM No comments:
पैदल बाटामा बेचबिखन गर्ने नांग्ले पसलेलाई महानगरका प्रहरीले सताउनसम्म सताउँछन् । पसले पनि ज्याद्रै छन् पापी पेटको सबाल जो छ । यस्तो लुकामारी बन्द गर्ने उपाय कहिल्यै नसोच्ने अनि सडकमा निर्माण सामग्री थुपारेर घर बनाउने ठूलालाई केही नगर्ने तर यी नांग्ले पसलेलाई सताउने गर्नु त अन्यायै हो । यसरी खोसेको सामग्री के हुन्छ ? महानगरका हाकिमहरूले जानकारी देलान् ?
बुधबार दिउँसो पेटीका पसलेलाई पक्रेर लैजाँदै महानगरका सुरक्षाकर्मी ।
Posted by Govinda at 6/02/2010 09:07:00 PM No comments:
Labels: महानगरमा महाअत्याचार
गोंगबु आवास क्षेत्रस्थित पौडी पोखरीबाहिरबाट भित्र चियाउँदै किशोरहरू। हेरेरै चित्त बुझाएका होलान् कि पोखरीमा जलपरी हेरेका होलान् ?
Posted by Govinda at 6/02/2010 07:24:00 AM No comments:
गोंगबु आवास क्षेत्रमा रहेको पौडि पोखरीबाहिरको प्वालबाट भित्र चियाउँदै किशोरहरू । रहर त उनीहरूलाई पनि थियो होला नि ।
Posted by Govinda at 6/02/2010 07:20:00 AM No comments:
हातमा औंला छैनन् तर यिनको चित्रकारिताले चमत्कार देखाएको छ । हाम्रो समाजमा यस्ता प्रतिभाको कदर गर्ने संस्कार छैन । त्यसैले उनले सडकमा माग्नु परेको छ गुजाराका लागि ।
Posted by Govinda at 6/02/2010 07:08:00 AM No comments:
नयाँ सडकमा भूगोल पार्कको पश्चिम पट्टिको पैदल बाटोमा यो सानो छाउरो कसैको वास कुर्दैछ । लैनसिंह वाङदेलको 'लंगडाको साथी' सम्झाउने गरेर। वासको मालिक वा मालिक्नी कतै माग्न वा अरू केही गरेर छाउरो र आफ्ना लागि खानेकुराको जोहोमा लागेको हुनुपर्छ । जस्तो भए पनि सम्पत्तिको माया लाग्ने रहेछ !
Posted by Govinda at 6/02/2010 06:20:00 AM No comments: